Infographic na ihe ọ bụla ị chọrọ iji lekwasị anya na ekwentị | Martech Zone
Anyị nọrọ ọtụtụ ole na ole na Edge nke Web Radio na-akọrọ ndị na-ege anyị ntị maka mkpa ekwentị. Anyị na-ekwukarị okwu gbasara ire ahịa ekwentị mana ka m nọ ọdụ n’ọdụ ụgbọ ahụ na-atụle ihe nkiri ahụ na Erin Sparks nke Atụmatụ saịtị, ọ malitere n'ezie ka m ghọta otú oké egwu omume na-agbanwe agbanwe dabere na ndụ m.
N'abalị a, edere m ezigbo enyi m na-eme mkpesa na email ya abụghị mobile anabata nakwa na enweghị m ike ịgụ ya na ekwentị m. Ọ bụrụ na ejighi email gị rụọ ọrụ, onye ọ bụla ga-eme mkpesa? Ka hà ga-eleghara ya anya ma ọ bụ wepu ya?
Izu ole na ole gara aga na anyị podcast, Edepụtara m ihe karịrị omume iri na abụọ anyị na-eme na mpụga ekwentị anyị tupu oge ahụ mana nke ahụ niile gafere na nkwụ aka anyị. Ekwentị oku, ederede ozi, igwefoto, Mkpu, kalenda alerts, azụmahịa, nkewa, music, video, ichekwa ego na bank, gaminggba Cha Cha, na-elekọta mmadụ, ike nsuso, tiketi, ịkwụ ụgwọ, invoicing, nnyocha, emailing, video ndekọ…
Erin gwara m banyere otu ndepụta dị ukwuu. Abịara m ya naanị site n’ịtụle ọrụ m na-arụ kwa ụbọchị. Ndepụta ahụ na-aga n'ihu na-eto dị ka ngwa mkpanaka na igwe ojii na-aga n'ihu na-ejere m ozi ihe niile m chọrọ. Ngwaọrụ mkpanaka m dị oke mkpa maka ọganiihu nke azụmaahịa m, ịkọrọ ndị ezinụlọ m, na ijikwa ọrụ ụbọchị m na ndụ ụlọ. Ekwenyesighi m ike na ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na m enweghị ekwentị mkpanaaka! Ana m ama jijiji ọbụna iche echiche banyere ya!
Ọ bụghị naanị m - ọ dị ka ụwa niile agagharịla na azụmaahịa chọrọ ịmata na ndị ahịa ha adịlarịrị… ọbụlagodi na azụmahịa ha abụghị!
Tags: ekwentị mkpanaakaDK New Mediaọnụ nke redio weebụblog teknụzụ ahịaMMSmobile MkpuMobile na Mbadamba ụrọụlọ akụ na ụzụmobile kalenda mataigwefoto igwefotongwa ahiaakụrụngwa na-eji ekwentị mkpanaakaomume ndị ahịa mkpanakaemail oziegwuregwu mkpanakaekwentị mkpanaaka nsusoekwentị mkpanaaka infographicinvoisingmobile nkewaahịa efuegwu ekwentiugwo ugwomobile nnyochamkpanaka mkpanakaozi ederede ederede mkpanakamobile tiketivideo mkpanakandekọ vidiyo vidiyooku ekwentịusoro saịtịSMSozi ederede